Gudoomiye Kuxigeenkii Guddiga doorashooyinka oo iska diiday xi... | Universal Somali TV
Gudoomiye Kuxigeenkii Guddiga doorashooyinka oo iska diiday xilka qaadista ay ku sameysay Xaliimo Yareey.
Guddoomiye ku-xigeenka Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Sayid Cali Sheekh oo suxufiyiinta kula hadlay magaalada Muqdihso, ayaa iska diiday xil ka qaadista ay ku sameysay Gudoomiyaha Gudidgaas Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimo Yareey.
Sayid Cali Sheekh, ayaa sheegay in cida xilka kala laaban karta ay tahay oo kaliya Golaha Shacabka, maadaama iyaga ay codka kalsoonida siiyeen, wixii ka soo hara ayuu tilmaamay iney tahay sifo sharciga baal marsan.
Xaliimo Yareey oo Gudoomiye u ah Guddiga Doorashooyinka Qaranka, ayuu ku eedeeyay iney sidii Dukaan ay iyada leedahay ka dhigato shaqadii Gudidga oo aaney wax shaqa ah qaban xubnaha Gudidga katirsan.
Sayid Cali Sheekh, ayaa sheegay inuu Golaha Shacabka horgeyn doono cadeymo uu hayo, taasoo muujineysa shaqada liidata ee ka dhex jirta Guddiga.
Si kastaba, Guddigan ayaa ah midka laga doonayo inuu dalka gaarsiiyo doorasho Qof iyo Cod ah marka lagaaro 2021, Waloow laga yaabo iney durba saameyn horleh keento khilaafka u dhexeeya xubnaha Guddigan.
Kan-xigaKhasaare ka dhashay Bam gacmeed lagu ...
Kan-horeXiliga la Caleema saarayo Madaxweynah...
45,935,467 unique visits